3 Oge eji eme ihe di n'ime oge ka iwelie itinye aka | Martech Zone
Mgbe ndị mmadụ na-eche maka ịhazi ọdịnaya, ha na-eche maka data nkeonwe etinyegoro na ozi email. Ọ bụghị maka naanị onye atụmanya gị ma ọ bụ onye ahịa bụ, ọ dịkwa maka ebe ha bụ. Mpaghara bu ohere buru ibu iji ghapu ahia. N'ezie, 50% nke ndị na-azụ ahịa na-achọ na mpaghara ha na ama ha gara ụlọ ahịa n'ime otu ụbọchị, yana 18% na-eduga n'ịzụrụ
Dabere na infographic site Microsoft na VMob, na-eji data oge eme ihe nwere ike ibute hyper-ahaziri ọdịnaya okike. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa nke jikọtara oge ahịa na ozi nkwado na ọnọdụ ihu igwe dị na mpaghara hụrụ ka ahịa na-abawanye site na 18%. Akwụkwọ akụkọ
Typesdị nhazi nke 3 nke ị nwere ike itinye na-eme ka ị nwekwuo ọnụ ọgụgụ, ntinye aka, na ntụgharị na atụmanya niile ị nwere ike ileghara anya:
Ọnọdụ - Mepụta mgbasa ozi na nkwalite dabere na ọnọdụ onye ọrụ.
okporo ụzọ - Nye ezigbo oge data data iji mee ka atụmanya gị gaa ebe kachasị adaba.
Weather - rụọ ọrụ na ihu igwe API iji kwado ahịa gị na ihu igwe ma ọ bụ ihu igwe na-abịa.
Mgbasa ozi di omimi, ọdịnaya weebụ dị ike, ọdịnaya email siri ike, ozi email, yana ịdọ aka na ntị ga-ebuga data iji nweta data dị adị.
Tags: mụbaa njikọ akaebeọnọdụ apidata ọnọdụmicrosoftọdịnaya ọdịnayaezigbo ogeokporo ụzọokporo ụzọ apidata okporo ụzọvmweatherihu igwe apidata ihu igwe